प्रेम : मन,तन या धन ? - Himalayan Kangaroo
Posted by Himalayan Kangaroo | २९ माघ २०७३, शनिबार ०६:४१ |
“प्रेमीद्वारा प्रेमिकामाथि एसिड प्रहार “
प्रेमी अर्थात प्रेम गर्ने मान्छे । एसिड छ्याप्न सक्ने, हत्या गर्न सक्ने, त्यो कस्तो प्रेम ? यदि त्यो प्रेम होइन भने, ऊ कसरी प्रेमी ? प्रेमदिवसको रुपमा मनाइने भ्यालेन्टाइन्स डेको नजिकिदै गर्दा घटेको यो घटनाले प्रेमी शब्दको अर्थलाई नै चुनौती दियो ।
भ्यालेन्टाइन्स डेको सन्दर्भ आउँदा मेरी एकजना साथीलाई सम्झिन्छु । हामी साथीहरुबीच त्यो वर्षको भ्यालेन्टाइन्स डे मनाउने प्रसङ्ग चल्दा उनले भनेकी थिइन्,“ मेरो ब्वइफ्रेन्ड त यु.केमा छ । तर म भ्यालेन्टाइन्स डेमा खाली बस्दिनँ । एउटा लम्फु छ सोझो । त्यसैसंग घुम्ने हो, केहि गिफ्ट नदिएपनि मोबाईल रिचार्ज त गर्देला । साँचो माया गर्छु भन्छ बिचरा ! ”
“ वाह ! हामी अरु त छोडौं “प्रेम दिवस“ लाई “धोका दिवस“ बनाइदिन्छौं । कसैको भावनाको मजाक बनाउन सकेकोमा गर्व गर्दै सुनाउँछौं ।
मेरो ब्वइफ्रेन्ड त यु.केमा छ । तर म भ्यालेन्टाइन्स डेमा खाली बस्दिनँ । एउटा लम्फु छ सोझो । त्यसैसंग घुम्ने हो, केहि गिफ्ट नदिएपनि मोबाईल रिचार्ज त गर्देला । साँचो माया गर्छु भन्छ बिचरा !
अर्कोतिर सामाजिक संजालको बढ्दो प्रयोगसंगै प्रेमको नामबाट ठगिनेहरु पनि बढ्दै छन् । कसैलाई प्रत्यक्ष रुपमा नदेखिकन गरिएको प्रेम, चाहे त्यो पत्रमित्रताबाट, फोनबाट, सामाजिक संजालबाट गरिएको प्रेम होस्, यसअर्थमा एउटा मनले अर्को मनलाई गरेको प्रेम । प्रेमको नाममा ठग्ने र कसैको भावनालाई मनोरन्जनको माध्यम बनाउने बढ्दो प्रचलनले गर्दा, आजकल यही आत्मिक प्रेम सबैभन्दा बढी बदनाम भएको छ ।
मनले गरिने प्रेमलाई दिमागले गर्ने मूल्यांकनले जितिरहेको छ । प्रेम नामक सम्बन्धलाई गर्लफ्रेन्ड र ब्वइफ्रेन्ड शब्दहरुले प्रतिस्थापन गरेका छन् । प्रेम एउटा फेसन बनेको छ, जहाँ प्रेम गर्नेहरुभन्दा बढी गर्लफ्रेन्ड र ब्वईफ्रेन्डको संख्या जोड्नेहरु भेटिन्छन् । आफू प्रेममा परेर सम्बन्ध जोड्नेहरु भन्दा बढी उसको शारीरिक संरचना, योग्यता, सबै कुराको नापतौल गरेर फाइदा देखियो भने सम्बन्ध जोड्नेहरु बढी छन् । त्यस्तै सम्बन्धलाई प्रेमको नाम दिएर एकमाथि अर्को हाबी हुन चाहन्छन् । घमण्डले प्रेमलाई निमोठिरहेको छ र प्रेम निसास्सिरहेको छ ।
केही महिना अगाडिको कुरा हो, म माइक्रोबस बिसौनीमा गाडी कुर्दै गर्दा, मदेखि पल्तिर भर्खर ११–१२ पढ्दै जस्ता देखिने दुईजना भाइहरु गफिदै थिए । एउटा भाइले आफ्नो गर्लफ्रेन्डको बारेमा सुनाउदै थिए, “ आइफोन सिक्स बोक्छे यार केटी । अरु त ठिक छ, घुम्दा पनि उसैले खर्च गर्छे, तर सबै कुरा सोधेर तनाव दिन्छे ।“ अर्कोले सोध्यो, “कति भयो घुमाउन थालेको, एक महिना पुग्यो ? “ ती भाइले जवाफ दिए ,“ एक महिना भएको भए त सबै भ्याइहाल्थे नि ! पन्ध्र दिन भयो टंगकिस सम्म पुगें ।“ प्रेम ? सम्बन्ध ? अनि ती भाइले कुरा गरेकी त्यो केटीको पनि नियत त्यस्तै छ या ऊ प्रेमको नाममा कसैको शिकार बनिरहेकी छे ? यस्ता सम्बन्धहरूले धेरै नराम्रा घटनाहरु निम्त्याइरहेका छन् । त्यसैले त प्रेम बदनाम छ । शंकाको घेराबन्दीमा छ ।
“ आइफोन सिक्स बोक्छे यार केटी । अरु त ठिक छ, घुम्दा पनि उसैले खर्च गर्छे, तर सबै कुरा सोधेर तनाव दिन्छे ।“ अर्कोले सोध्यो, “कति भयो घुमाउन थालेको, एक महिना पुग्यो ? “ ती भाइले जवाफ दिए ,“ एक महिना भएको भए त सबै भ्याइहाल्थे नि ! पन्ध्र दिन भयो टंगकिस सम्म पुगें ।“
केहि दिनअघि झापामा प्रेममा रहेका एक जोडीले संगै आत्महत्या गरे । आत्महत्याको कारण थियो ’ विजातीय प्रेम ’ । गज्जबको छ हाम्रो समाज, प्रेमलाई पनि डोरीले कसेर राखेको छ । आफ्नो जात, आफ्नो जातभित्रको पनि आफ्नो भात मिल्नेसंग मात्र प्रेम गर भन्ने आदेश दिन्छ । समाजको यो आदेश उल्लङ्घन गर्न नसकेका र आत्महत्याको बाटो नरोजी सम्झौतामा आफूलाई ढालेका प्रेमी प्रेमिकाहरुका विजातीय प्रेम सम्बन्धका कथाहरु हाम्रो समाजमा बर्गेल्ति भेटिन्छन् । सामजिक मूल्य मान्यतासंग डराएर प्रेम कतै लुकेर बसेको छ ।
प्रेमले मानिसलाई जिउन सहज बनाउँछ । जीवनको बाटोमा हिंड्ने ऊर्जा दिन्छ । प्रेम जीवनको ज्योति हो । घमण्ड, स्वार्थ, रिस, डाहको बल फुकेर कसैको जीवनमा अन्धकार नभित्र्याउँ । हाम्रो आफ्नो स्वार्थको निम्ति पवित्र “प्रेम“ शब्दलाई बद्नाम नबनाऔं ।
भावनाको कदर गर्दै प्रेमलाई पूजा गर्न र पर्वको रुपमा मनाउने अवसरको रुपमा सुरुवात गरेका सेन्ट भ्यालेनटाइन्सप्रति प्रेमपूर्ण नमन । भ्यालेनटाइन्स डेको सम्पूर्णमा शुभकामना ! प्रेमका फूलहरु सधै फक्रिरहुन् ।
Previousप्रधानमन्त्री र पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईबीच भेट
Nextनेपाली युवालाई एकजुट बनाउन अष्ट्रेलियामा क्रिकेट
२६ भाद्र २०७४, सोमबार ०६:३५
१ जेष्ठ २०७४, सोमबार ११:१४